Dowladda oo dib u eegeysa tallaabadii lagu xiray Isgoyska Dabka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo dib u eegeysa tallaabadii lagu xiray Isgoyska Dabka
War kasoo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ay ka fiirsaneyso tallaabada ay ku xirtay isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka hadlayay tallaabada ay dowladda Soomaaliya ku xirtay waddo muhiim ah oo ku taal magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono “ Go’aanka Isgoyska Dabka qeyb ahaan lagu xiray wuxuu abuuray culeys dhanka dhaqdhaqaaqa Shacabka. Inshallah dib u eegis deg deg ah ayaa lagu sameynayaa iyada oo had iyo jeer ahmiyadda la siinayo daryeelka shacabka ,lana sii xoojinayo adkeynta amniga” ayuu yiri Maxamed Ibraahim Mucallimuu.
Laamaha ammaanka ayaa xiray waddada Dabka ee magaalada Muqdisho, iyagoo ka jawaabaya falkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay Isgoyska Sayidka ee ku dhaw madaxtooyada Soomaaliya kaaso geystay qasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed, waxaa la shaaciyay in gaarigii isku qarxiyay Isgoyska Sayidka uu kasoo gudbay baro koontarool taasoo ay ugu dambeysay midda Isgoyska Dabka.
Isku socodka dadka ee magaalada Muqdisho iyo ganacsigii ayaa ciriiri xoog leh laga dareemay durba, markii si rasmi ah loo xiray waddada Dabka ee isku xirta Suuqa Bakaaraha iyo Waddada halbowlaha ah ee Maka Al mukarama.